रोचक Archives - Samudrapari.com
मंगल ग्रहमा ९४ मिनेट लामो भूकम्प
सोमबार, बैशाख १९, २०७९
नासाको इनसाईट ल्यान्डर सन् २०१८ नोभेम्बरमा मंगल ग्रह अवतरण गरेको थियो । सोही ल्याण्डरमा हालसम्मकै सबैभन्दा संवेदनशील सिस्मोमिटर जडान गरिएको छ । मंगल ग्रहमा अवतरण गरेदेखि यसले सो ग्...
जब चारवर्षे बालकले आमाको कार सुटुक्क लिएर हिँडे
काठमाडाैं - द नेदरल्यान्ड्समा एक चारवर्षे बालकले आफ्नी आमाको कार सुटुक्क चलाएर सडकमा पुर्‍याएपछि उक्त घटनाको चर्चा भएको छ । युट्रेक्ट सहरमा शनिवार बिहानै ती बालकले चलाएको कार पार्क...
रिसालु श्रीमतीलाई कसरी सम्हाल्ने ?
शुक्रबार, बैशाख ०९, २०७९
विवाहपछि श्रीमान श्रीमतीबीच झै–झगडा हुनु सामान्य हो । तर, यदि श्रीमती नै धेरै रिसालु परेमा के गर्नुहुन्छ ? आउनुहोस् जानौं रिसालु श्रीमतीलाई सम्हाल्ने तरिका । श्रीमतीको पग्लिने बिन...
तपाइँको हातमा छ यस्तो हस्तरेखा ? जापानीहरु के भन्छन् ?
बिहिबार, बैशाख ०८, २०७९
टोकियो - ज्योतिष शास्त्र अनुसार, कुनैपनि मानिस कति भाग्यमानी छ भनेर उसको हातमा भएका रेखाले पनि विश्लेषण गर्न सकिन्छ । हातमा हुने कुन रेखा कता र कति फर्किएको छ अर्थात आकार कस्तो छ?...
किन जनावरको भन्दा मानिसको आयु लामो हुन्छ ?
मंगलबार, बैशाख ०६, २०७९
के तपाईंले कहिल्यै सोच्नुभएको छ मानिस किन हाम्रो वरपरका जनावरहरूभन्दा धेरै लामो जीवन बाँच्छ ? निश्चय नै तपाइँले एक वा धेरै पटक यसबारेमा सोचेको हुनुपर्छ । हाम्रा पशु साथीहरू– कुकुर...
कमिलाहरु किन सधै लाइनमा हिड्छन् ?
पृथ्वीमा धेरै अनौठा जीवहरू पाइन्छ । यी जीवहरू मध्य एउटा कमिला पनि हो । कमिलामा धेरै अनौठो चीजहरू देख्न सकिन्छ । कमिलाको बानी देखेर हामी सबै अचम्मित हुन्छौं। कमिलाहरू सधैं एउटै लाइन...
विश्वकै बढी उमेरको गोरिल्लाको ६५औँ जन्मदिन
आइतबार, बैशाख ०४, २०७९
काठमाडौं - विश्वको सबैभन्दा बढी उमेरको मानिने गोरिल्ला फाटोउले भर्खरै बर्लिन चिडियाखानामा आफ्नो ६५औं जन्मदिन मनाएको छ । फाटोउलाई अहिले जीवित मध्ये सबै भन्दा बढी उमेरको गोरिल्ला मान...
वैज्ञानिकले पत्ता लगाए संसारकै सबैभन्दा मनपर्ने सुगन्ध
काठमाडाैं - संसारमा हजारौँ किसिमका फूलहरू पाइन्छन् र प्रत्येकको फरक–फरक सुगन्ध हुन्छ । तर, अब वैज्ञानिकहरूले संसारको सबैभन्दा मनपर्ने सुगन्ध पत्ता लगाएका छन् । यो सुगन्ध संसारभरका...
रक्सीको लतबारे वैज्ञानिकको यस्तो खुलासा
संसारमा धेरै मानिसले मदिरा सेवन गर्छन् । संसारमा धेरै मानिसहरू छन् जो मदिरा बिना बाँच्न सक्दैनन् । मदिरा पिउनु स्वास्थ्यका लागि निकै हानिकारक हुन्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ, तर पनि मानि...
नाङ्गो खुट्टा शंख बजाउँदै बेहुली लिन जाने अनौठो गाउँ
विवाह भनेको सबैका लागि विशेष दिन हो । विवाहलाई यादगार बनाउनको लागि मानिसहरूले करोडौँ रुपैयाँ खर्च गर्छन् । महँगो लुगादेखि ब्यान्ड बाजासम्म सबैका लागि पैसा खर्च गर्छन् । तर, भारतमा ...